ब्रायन वालेसले साझा गरे इतिहास, विकास, र प्रभावकारी मार्केटिंगको भविष्य त्यसले प्रभावकारी परिभाषित गर्ने कार्यको उत्कृष्ट काम गर्‍यो र कसरी ब्रान्ड उनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिरहेको थियो। ब्रान्डले कसरी प्रभावकर्ताहरूसँग काम गर्दछ भन्ने कुराको बारेमा म धेरै प्रस्ट छु र म विश्वास गर्छु कि MDG विज्ञापनबाट आएको इन्फोग्राफिकले एक सफल प्रभावकारी मार्केटिंग सम्बन्ध कस्तो देखिन्छ भन्ने विवरणमा एक अपवादात्मक काम गर्दछ।
https://martech.zone/neverbounce-referralचलिरहेको एम्बेसडरशिपहरू - हालसालै, मसँग चलिरहेको राजदूत छ Agorapulse। यो मसँग कुनै ब्रान्डसँग पाएको सबै भन्दा राम्रो सम्बन्ध हुन सक्छ। मैले सामाजिक मिडिया खाताहरूको अधिकता ह्यान्डल गर्दा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफर्महरूसँग निराश भएपछि मैले एगोरापुल्सेसँग सम्बन्ध बनाए। प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस टास्क सूची वा ईनबक्स जस्तै धेरै काम गर्दछ, जहाँ तपाईंको टोली सजिलै बाह्य अन्तर्क्रियाहरू प्रबन्ध गर्न सक्दछ। मेरो पहुँच र उनीहरूको उत्पादनको मेरो उत्कटताको संयोजनले ढोका खोल्यो जहाँ एरिक र उनको टोलीले मलाई राजदूत कार्यक्रमको लागि साइन अप गरे। कुनै दबाब, र पूर्ण खुलासा बिना, म Agorapulse बारेमा बोल्दछु जब व्यक्तिहरू आफ्नो सामाजिक मिडिया प्रबन्ध गर्न मञ्च खोज्दैछन्।
उत्पाद समीक्षा - Shure मलाई एक पठाएको MV88 मेरो आईफोनको लागि एक बर्ष पहिले परीक्षणको लागि माइक्रोफोन। अपेक्षा यो थियो कि मँ मेरो समीक्षा अनलाइन साझेदारी गर्नेछु र त्यसपछि माइक्रोफोन फिर्ता गर्दछु। शुरेले महसुस गरे कि उनीहरूसँग एक शानदार उत्पाद छ र प्रभावको साथ पोडकास्टर मार्फत मार्केट गर्न चाहन्छ। ठिकै छ, म माइक्रोफोनको साथ यत्तिको गहिरो प्रेममा परें कि म यसलाई सबैलाई देखाउँछु ... र मैले शुरलाई सोधेँ कि म यसलाई राख्न सक्दिनँ।
कार्यक्रम कभरेज - हाम्रो प्रकाशन र हाम्रो पोर्टेबल स्टूडियोको साथ, म प्राय: घटनाहरू तिर्ने, यात्रा, र खर्चको बदलामा घटनाहरू कभर गर्न भनिन्छ। कार्यक्रममा हामी लेखहरू प्रकाशित गर्दछौं, पोडकास्टहरू रेकर्ड गर्दछौं, फेसबुक लाइभ सेसन गर्दछौं, र घटनाहरूको लाइभ-ट्वीट गर्दछौं। मैले घटनाहरू पछि उपस्थित व्यक्तिहरूसँग मेल घरमा हाइलाइट ब्रोशरहरू विकास गर्न स्टाफलाई पनि ल्याएको छु। हालसालै, मैले यो डेल वर्ल्डको लागि गरे जहाँ म मार्क स्फेफरसँग उनीहरूको ल्युमिनरीज पोडकास्टमा साझेदारी गर्दै थिए। एक अविश्वसनीय घटना र अवसर। मञ्चमा उभिएर पनि, यो मेरो मनपर्ने तरिका हो सम्मेलनको अनुभव गर्न!
प्रायोजित सामग्री - जबकि म प्रायोजित सामग्री आपत्ति छैन, म वास्तव मा एक पार्टनर संग कम्पनीहरु को बारे मा पिकअप हुँ। तिनीहरू वास्तवमै आफ्नो बजार क्षेत्रका नेताहरू हुनुपर्दछ र हाम्रा पाठक, श्रोता, र अनुयायीहरूलाई मूल्य प्रदान गर्नुपर्दछ। यदि यसले मेरो ब्रान्डलाई जोखिममा राख्छ भने, म यो गर्दिन। मैले वर्षौंदेखि धेरै कम्पनिका कम्पनीहरु परिवर्तन गरिसक्यो किनकि म कम्पनी वा उत्पादनको लागि ठोकुवा गर्न सक्दिन। तपाईं प्राय: बाटोमा प्रायोजित सामग्री फेला पार्नुहुनेछ मार्केटिंग घटनाहरू हामी साझा गर्दछौं.
बजारहरूले भन्छन् कि सब भन्दा प्रभावकारी सामग्री विश्वसनीय, अनुभवी प्रभावकारीहरूबाट आउँदछ। अवश्य पनि, म यससँग सहमत छु। म विश्वास गर्छु, विश्वसनीय, अनुभवी प्रभावकारीहरूले वर्षौं, सायद दशकौंसम्म खर्च गरे, उनीहरूको उद्योगमा उनीहरूको अधिकारको निर्माण। त्यस्तो लगानीको साथ, तिनीहरू सजिलैसँग आफूलाई बेच्न सब भन्दा उच्च बिडोरमा राख्दैनन्। म निश्चित छु कि म मेरो प्रभावकारी मार्केटिंग राजस्व दोब्बर वा तिगुना गर्न सक्छु, तर म यसलाई मेरो पाठकहरू द्वारा आदर गुमाउने खर्चमा गर्दिन। मलाई ब्राण्डले भुक्तान गरेको कुरा मेरो विश्वसनीयता बनाउनको लागि लिइएको प्रयाससँग तुलना गर्दैन, र म यसलाई जोखिममा लिने छैन।